GARBAHAAREEY ONLINE » SAWIRRO: Naag nin iska dhigtay si ay shaqo u hesho oo ugu dambeyn fashil yaab leh uu ku dhacay..
Post Views = 258
Iskuulka ma aadi jirin, sidaas darteed camal aan ahayn inaan shaqeysto ma garanyn”, ayay tiri Pili.
“Muddo sanad ah ka dib si weyn ayay macdan qodista uga macaashtay ka dib markii ay heshay laba dhagax oo waaweyn oo ah macdanta nooca loo yaqaanno tanzanites. Lacagtii ay ka heshay waxay uga dhistay guri aabaheed, hooyadeed iyo gabar ay mataano ahaayeen.
“Dhab ahaantii kama aysan rumeysanin booliska inaan ahay qof dumar ah. Ma ahan arrin fudud inay aqbalaan ilaa iyo sanaddii 2001 markaasi oo aan guurssaday oon yagleelay qoys.”